रमिला न्यौपाने र खुमन अधिकारीको तीज गित पशुपतिमा सार्वजनिक (भिडियो सहित) - Kendrabindu Nepal Online News
लोक गायिका रमिला न्यौपाने र गायक खुमन अधिकारीको स्वरमा रहेको नयाँ तीज गित सार्वजनिक भएको छ । हिन्दु नारीहरुको महान् पर्व हरितालिका तीज नजिकिदै गर्दा बजारमा नयाँ नयाँ तीज गितहरु आउने क्रममा आएको यो गित अहिले निकै रुचाइएको छ ।
युट्युबमा अप्लोड भएको २४ घन्टामै १४१ हजार भन्दा बढी दर्शकले हेरिसकेको यो गित अहिले ट्रेडिङ्ग नं. ४२ मा आएको छ । यस गीतमा खुमन अधिकारीको लय तथा बाबुराम बोहराको शब्द सिर्जना रहेको छ । संगित खुमन अधिकारी तथा संगित संयोजन विनोद बाजुरालीको छ ।
खुमन अधिकारीको तीज गित, पशुपतिमा सार्वजनिक, रमिला न्यौपाने र
Prevकसरी बनाउने मीठो पिज्जा ? (भिडियोमा)
दोर्दी खोलामा बाढी आउँदा ४ जनाको मृत्यु, दर्जन बढी सम्पर्क बाहिरNext